एशिया र प्रशान्त - ALinks
एशिया र प्रशान्त मा लेख
घर र चीनमा भाँडामा लिने
नोभेम्बर 21, 2021 एन्टिका कुमारी चीन, आवास
चीनमा सहि आवासको खोजी गर्न, यसले गति, लगनशीलता र सामान्यतया एक राम्रो मित्र वा रियाल्टर लिन्छ जसले स्थानीय बोली बोल्दछ। हामी तपाईंलाई विभिन्न प्रकारका उपलब्ध आवासको माध्यमबाट हिंड्नेछौं, के हुन सक्छ
हङकङ भिसाको लागि कसरी आवेदन दिने?
नोभेम्बर 18, 2021 मैत्री झा हङकङ, यात्रा
हङकङ तपाईको छुट्टीको समयमा भ्रमण गर्नका लागि उत्तम ठाउँहरू मध्ये एक हो, र यदि तपाइँ भ्रमण गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ भने, तपाइँ पहिले भिसा आवश्यकताहरू जाँच गर्नुपर्छ। हङकङ भिसाको लागि कसरी आवेदन दिने? 1) तपाईंले आफ्नो आवेदन पेश गर्न सक्नुहुन्छ
शिक्षा प्रणाली र चीन मा स्कूलहरू
नोभेम्बर 18, 2021 एन्टिका कुमारी चीन, विद्यालय
चीन, गणतन्त्र चीन भनेर चिनिन्छ, पूर्वी एसियाको एउटा देश हो। चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको र चौथो ठूलो देश हो। यस देशको शिक्षा प्रणाली पनि शीर्ष देशहरू मध्ये एक हो। द
अष्ट्रेलिया भिसाका लागि कसरी आवेदन दिने?
नोभेम्बर 11, 2021 एन्टिका कुमारी अष्ट्रेलिया, भिसा
तपाईंसँग अस्ट्रेलियामा यात्रा गर्न, अध्ययन गर्न, र काम गर्न अष्ट्रेलियाको भिसा हुनै पर्छ। तपाईंलाई यसको आवश्यकता पर्दैन जबसम्म तपाईं एक अष्ट्रेलियाली राहदानी हो। त्यसोभए यदि तपाइँ अष्ट्रेलियाली भिसाका लागि आवेदन दिन लाग्नु भएको छ भने हेर्नुहोस्। को भिसा नीति
पाकिस्तानमा भिसाका लागि कसरी आवेदन दिने?
नोभेम्बर 8, 2021 मैत्री झा पाकिस्तान, भिसा
पाकिस्तानका लागि भिसा प्राप्त गर्नुहोस्: पाकिस्तान तपाईंको यात्रा सूचिमा स्थान नहुन सक्छ। दुबै आगन्तुक र निवासीहरूको लागि सुरक्षा मुद्दाहरूको कारण। यी मुद्दाहरुले अमेरिकीहरुलाई पाकिस्तान असम्भव बनाएको छ। तर, धेरै साहसी पर्यटकहरू रोक्न
लिबियामा शरण कसरी प्राप्त गर्ने?
अक्टोबर 22, 2021 मैत्री झा लिबिया, शरणार्थीहरू
लिबिया मा शरण कसरी प्राप्त गर्ने? यदि तपाइँ लिबिया मा शरण चाहानुहुन्छ तपाइँ UNHCR वा IRC बाट मद्दत लिन सक्नुहुन्छ। यी दुई लिबिया मा प्रमुख काम गर्ने निकायहरु को बीचमा छन् जो सीधै शरणार्थी वा शरण चाहनेहरुलाई समर्थन गर्दछन्। हेरौं कसरी
अफगानिस्तानको लागि शरण आवेदन कसरी गर्ने
अक्टोबर 19, 2021 करुणा चन्दना अफगानिस्तान
म अफगानिस्तानको नागरिक हुँ। के UNHCR ले मलाई दर्ता गर्न वा अफगानिस्तान भित्र शरण दिन सक्छ? UNHCR ले अफगान नागरिकहरूलाई शरणार्थी वा शरणार्थीको रूपमा दर्ता गर्न सक्छ जब तिनीहरू अफगानिस्तान बाहिर छन् र अर्को देशमा सुरक्षा खोज्दैछन्। यदि
संयुक्त राज्य अमेरिका बाट जोर्डन को लागी एक भिसा कसरी प्राप्त गर्ने?
अक्टोबर 15, 2021 करुणा चन्दना जोर्डन, भिसा
जोर्डन मा प्रवेश गर्न को लागी, अमेरिकी बासिन्दाहरु लाई एक मान्य जोर्डन भिसा हुनु पर्छ। वा जोर्डन को आन्तरिक मंत्रालय बाट विशेष प्रवेश अनुमति। जोर्डन "मध्य पूर्व को स्विट्जरल्याण्ड" को रूप मा परिचित छ। यो एक शान्त र स्थिर राजनीतिक वातावरण को रूप मा राख्छ।
123 ... 26 अर्को पोस्टहरू»